कोरोना महामारीकै बीच राष्ट्रपतिको रात्रिभोज ! | लगातार समाचार
Home देश कोरोना महामारीकै बीच राष्ट्रपतिको रात्रिभोज !
कोरोना महामारीकै बीच राष्ट्रपतिको रात्रिभोज !
१० असार २०७७, बुधबार ११:२९
काठमाडौं, असार १० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न दलका नेतालाई शीतलनिवास बोलाएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले रात्रिभोजको व्यवस्थासहित सबै दलका नेताहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
नेताहरूलाई साँझ पाँच बजे आइपुग्ने गरी निम्ता गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले भने यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने,’यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन। यदी कार्यक्रम हुने भएपनि दिउँसो एक बजेपछि जानकारीमा आउला। राष्ट्रपतिसँग हुने भेटघाटका कार्यक्रम त भइरहन्छन्।’
यता सत्तारुढ दलका एक नेताले साँझ पाँच बजेलाई राष्ट्रपतिले बोलाएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपति ज्यूले बोलाउनुभएको छ। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नलाई हुनसक्छ।’
कसकसलाई बोलाएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने,’कसकसलाई भन्ने त मलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर मलाई पाँच बजेका लागि बोलाइएको छ। अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीपछिको अवस्था र पछिल्लो गतिविधिका विषयमा कुराकानी गर्न हुनसक्छ।’
राष्ट्रपति कार्यालयमा उपस्थित हुन नेकपाका अधिकांश नेताहरूलाई निम्ता पुगेको पाइएको छ। राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने भोजमा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूमात्र सहभागि भएपछि आलोचना हुनसक्ने भएकाले राष्ट्रपतिले अन्य दलका नेताहरुलाई पनि बोलाएको अर्का एक नेताले बताए।
‘राष्ट्रपति देशको अभिभावक बन्नुपर्ने तर एक पार्टीको मात्र बन्नुभयो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यही भएर राष्ट्रपतिले सबैलाई बोलाएको हुनसक्छ,’ उनले भने। तर कोरोना भाइरस महामारीका बेला जनता त्रसित भइरहेको अवस्थामा रात्रिभोजसहितको मिटिङ आवश्यक नभएको उनले बताए। उनले यतिबेला सबै जुटेर कोरोना विरूद्ध लाग्नुपर्ने बताए।
कसकसलाई गरियो निम्ता
राष्ट्रपति कार्यालयले आयोजना गरेको रात्रिभोजसहितको बैठकका लागि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, नेकपाका स्थायी कमिटीसम्मका केही नेतालाई बोलाइएको छ।
कांग्रेससहितका अन्य केहि दलका नेतालाई पनि शीतलनिवास बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयबाट निम्ता आएपनि जानेनजाने बारे टुंगो नभएको बताए। उनले भोज आयोजना गरिएको भन्दै निमन्त्रणा गरिएको जानकारी दिँदै यस्तो अवस्थामा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा सल्लाह गरिरहेको बताए।
यसअघिको स्थायी कमिटी बैठकको समयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा नेताहरुलाई दिवा भोज दिएर पार्टीको वैचारिक तथा गुटगत व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेकी थिइन।
केहीदिन अघि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छुट्टाछुट्टै भेटेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सचिवालयका अन्य नेताहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेकी छन्। उनको सक्रियतालाई नेकपाका नेताहरुले ओली पक्षलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लिने गरेका छन्।
आजैदेखि सुरू हुने नेकपाको स्थायी कमिटी बैठककै बेला बोलाइएको रात्रिभोजसहितको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिनुपर्ने नेताहरु बताउँछन्।
रणवीर भन्छन्, ‘करणले हाम्रो नाममा पैसा कमाए’